चैनपुर ताक्लाकोट सडक सुदूरपश्चिमकै समृद्धिको मुलधार भएकाले चाँडो खोलिनुपर्छः सांसद विक - Palikanews.com
चैनपुर ताक्लाकोट सडक सुदूरपश्चिमकै समृद्धिको मुलधार भएकाले चाँडो खोलिनुपर्छः सांसद विक
पालिका संम्बादमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली जिल्ला बझाङ्गबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएका सांसद आशा विकसँग छलफल गर्दैछौ । दलित महिला समानुपातिक आरक्षण अन्र्तगत बझाङ्ग नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विकले आफ्नो क्षेत्रको विकास, सामाजिक कुसंस्कार, बेतिथि, जातियता, महिला हिंसा लगायतका सवालमा बारम्बार सदनबाट र अन्य माध्यमबाट आवाज उठाइराख्नु हुन्छ । विशेष गरेर आफ्नो जिल्लाको विभिन्न मुद्धाहरु उठान गरेर ति मुद्धाको समाधानका लागि खटिरहने स्वभाव भएकाले अहिले बझाङ्गबासी जनसमुदायको माझमा उहाँ लोकप्रीय हुनुभएकोछ ।
बझाङ्गको समृद्धिसँग जोडिएका जस्तै, वर्षौदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बझाङ्गको देवल विमानस्थल सञ्चालन गुर्नपर्ने, चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माण गर्नु पर्ने, नेपाल चिन सिमानामा रहेको बझाङ्गको उरै नाकालाई स्थायी नाकाको रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने, बझाङ्गको सेती नदि पारीको भुगोललाई जोड्न अलपत्र अवस्थामा रहेका पुलहरु यथासिघ्र निर्माण गर्नु पर्ने लगाएतका महत्वाकांक्षी योजानाहरुलाई पुर्णता दिन उहाँको विसेष भुमिका रहेको थियो । जसमध्ये बझाङ्गको देवल विमास्थल गत असोज १७ गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ ।
पालिका न्युजको लागि संवाददाता सुनिल धामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विकसँगको संवाद
१) तपाईको नजरमा बझाङ्गको समृद्धिका आधार के के हुन? र तपाई निर्वाचित भइसकेपछि बझाङ्गको विकासका लागि के के गर्नु भयो?
बझाङ्गमा समस्या मात्रै नभएर सम्भावना पनि धेरै छन् । केहि राज्यको स्रोत साधनलाई स्थानिय स्रोत साधनमा लगानि गरियो भने बझाङ्ग सम्भावना भएको जिल्ला हो । अहिले सम्म केन्द्र सरकारले बझाङ्गलाई विभेदकारी तरिकाले हेरेको प्रदेश र जिल्ला भएतापनि विभिन्न स्रोत साधन र सम्भाव्यता भएको जिल्ला भएकाले मैले जनताको मतलाई जितेर आइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य नभुलेर जनमतको कदर गदै आफुले भ्याएजति गर्ने कोसिस गरेकोछु । जसमा पनि विगत देखि नै ठेक्का लगेर अलपत्र पारिएका योजनाहरु, बहु वर्षिय योजनाहरु र छोटो अवधिका योजनाहरुमा मेरो पहल रहेकोछ । भौतिक विकास मात्रै नभएर मानविय विकासतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिले काम गरिएकोछ । अहिले मान्छे दुई छाक भोको बसेर मर्दैन तर एक घण्टा सामाजिक सञ्जाल, मिडियासँग जोडिएन भने उसलाई असहज महसुस हुन्छ । विडम्बना, बझाङ्ग अझैपनि राम्रोसँग इन्टरनेट, फोन सुविधासँग जोडिएको छैन । त्यसलाई सहज र सुलभ तरिकाले विस्तार गर्नका लागि मन्त्रालयहरुसँग पहल गर्नुपर्ने कामहरु भइराखेकोछ । केहि कामहरु भइसकेकाछन् । हेहि प्रक्रियामा पनि छन् । केहि हुन बाँकीछन् । बझाङ्गको देवल विमानस्थल बर्षाै देखि अलपत्र अवस्थामा थियो जसको कारणले बझागीं जनताले निकै दुख व्यहोर्नु परेको थियो । अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा आएकोछ ।
२) चैनपुर ताक्लाकोट सडक चाँडो निर्माण गरिनुपर्छ र नेपाल चिन सिमानामा रहेको उरै नाकालाई औपचारिक नाकाको रुपमा खोल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको थियो । अहिले के छ अवस्था?
चैनपुर ताक्लाकोट सडक जे जति हुनुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन । कछुवाको गतिमा काम भइराखेकोछ । अघिल्लो वर्ष यहि पटक हिउँ परेको कारण र छ पटकसम्म भारि हिउँ परेको कारणले बझाङ्गमा काम हुन सकेन भनेर ठेकेदार ले निहुँ पाए । त्यसपछि फेरी गत चैत्रदेखि कोरोनाको कहरका कारणले सामान ढुवानी गर्न सकिएन । कामदार अभाव भयो भनेर निहुँ पाए । यस्तै बाधा अड्चन देखाएर ठेकेदार उम्किने काम भएकोछ । र, उहाँहरुलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने काम भएकोछ । विचमा निकै ठुला भिरहरु पनि थिय जसमा ब्लास्टिङ्ग भएकाछन् । हाम्रो टार्गेट सडक धुलीसम्म पुर्याउने हो । तर, यस्तै गतिमा हो भने अझै दश पन्ध्र वर्ष लाग्छ । यो बझाङ्गी जनताको समृद्धि हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि हो । र, समग्रमा नेपालको समृद्धि हो । सुदूरपश्चिमको विकासको मुल आधार चैनपुर ताक्लाकोट सडक हो । यसमा बारम्बार ताकेता गर्दापनि काम तिव्र गतिमा हुनसकेको छैन । यसको लागि मैले केहिदिन अघि परराष्टमन्त्रिसँग भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकोछु । त्यहाँको भुगोल कठिन किसिमको छ । ठुलाठुला भिरहरुछन् । त्यसैले भुगोलको अध्ययन गरेर सडक विस्तार गरिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग माग गरेकोछु ।
३) निर्माण व्यवसायीले राजनितिक संरक्षण पाएको हुनाले निमार्ण कार्यसँग सम्बन्धित कामहरु ढिलासुस्ति हुन्छन् भन्ने छ । यसमा तपाईको धारणा के छ?
मलाई राजनितिक संरक्षण भएको छ जस्तो लाग्दैन । कुनैपनि दलको नेताले आफ्नो जिल्लामा बाटो पु¥याउने इच्छा राख्दछ । काम ढिलाहुनुको कारण काुननी प्रक्रिया मै समय लाग्दो रहेछ । जसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । अर्कोकुरा ठेकेदारको लापरबाहि पनि हो । एउटै ठेकेदारलाई धेरै ठेक्का दिनुहुदैन । त्यसोगर्दा ठेकेदारले एकठाउँको पैसाको लगानी अर्काे ठाउँमा गर्ने हुनाले काममा ढिलासुस्ति भएकोछ । एउटै ठेकेदारलाई धेरै ठेक्का दिनुहुदैन । मैले यस्तो किसिमको माग पनि संसदिय समितिमा राखेकोछु ।
४) तपाई निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सम्झनलाएक केके कामहरु गर्नु भयो ? केके गर्नबाँकी छन् ?
देवल विमानस्थल सुचारु भएकोछ । तत्कालै पहल भएको बझाङ्गको चारवटा स्थानिय तह खप्तड छान्ना, साइपाल, छविस पाथिभेरा गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकामा दश शैयाको अस्पताल यहि महिना सिलन्यास हुदैछ । अघिल्लो वर्ष चौवालिसवटा स्वास्थ्य चौकी बझाङ्गमा परेकोहो । केहि बनिसके । केहि निर्माण पक्रियामा छन् । विभिन्न ठाउँमा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण भएकाछन् । साइपालको थरुनिघाटमा झोलुङ्गे पुलको लागि केहिदिन पछि सामान ढुवानी हुदैछ । बझाङ्गका विद्यालयलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भनेर सञ्चार मन्त्रालयबाट विभिन्न विद्यालयलाई कम्प्युटर वितरण गरिएकाछन् । गाउँगाउँमा सडक बन्दैछन । प्रत्येक स्थानिय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडकका योजनाहरु सञ्चालनमा छन् । विडम्बना सेती पारिका साबिकका बाईसवटा गाविस जोड्ने पुल बनेको छैन । त्यसको लागि चैनपुरको पानकोट पुलको सामान गइसकेकोछ । सेतीको पानिको बहाव घट्नासाथ छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न होला । झनानाको पुल पनि निर्माण पक्रियामै छ । देविशैन पुलको ठेकेदारले पटक पटक ताकेदा गर्दापनि काम गर्न अटेरी गरिराखेको अवस्था छ । मैले मन्त्रालयमा मन्त्रि ज्यूसँग तुरुन्त काम गर्नुभएन भने उहाँको लागि अर्को एक्सन लिनुपर्छ भनेर पनि दवाव दिएकोछु । बझाङ्गमा अहिले लिफ्टिङ्ग सिचाईको योजना परेकाछन । बझाङ्गको जिल्ला स्वास्थ्यको अस्पताल राम्रो काम भएकोछ । त्यहाँका डाक्टरहरुले राम्रो काम गरिराख्नु भएकोछ । कोरोना परिक्षणको लागि पिसिआर मेसिन जडान गरिएकोछ । ब्लड बैंक स्थापना भएकोछ ।
मलाई सबैभन्दा दुख लागेको र गर्न नसकेको काम स्थानिय तहमा कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन । प्राय स्थानिय तह कार्यालय प्रमुख विहिन छन् । अस्ति मात्रै म बझाङ्ग जादा सिडियो कार्यालयमा सम्पुर्ण कार्यालय प्रमुखको बैठक राखे तर विडम्बना केहि कार्यालयको बाहेक प्राय स्थानिय तहमा निमित्त कार्यालय प्रमुखले काम चलाएको रहेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउनुस भनेर बारम्बार भनेकाछौँ तर कर्मचारी जानमानि राखेका छैनन् । धेरै क्षेत्रमा निरन्तर विकास भइराखेकाछन् । बझाङ्गको विकासका लागि निरन्तर बोलि राखेकोछु । बोल्ने एक किसिमको अभियान जस्तै भएकोछ । एकदिन एउटा मिडियाको सरले “चैनपुर ताक्लाकोट” भनेर बोलाउनु भयो । कस्लाई भनेको रहेछ भनेर फर्केर हेरे । मलाई नै रहेछ । किन बोलाउनु भयो भनेर सोधे । “तपाईले सधैभरी चैनपुर ताक्लाकोट सकडको विषयमा बोल्नु हुन्छ त्यसैले नामै चैनपुर ताक्लाकोट राखेको” भनेर भन्नु भयो ।
५) तपाइले बारम्बार संसदमा उठाईराख्ने विषय छाउपडी प्रथा पनि थियो । बझाङ्ग पनि छाउपडि प्रथाबाट ग्रसित जिल्ला हो । के छ अहिलेको अवस्था ?
विडम्बना तिन पटक छाउपडि प्रथाको बारेमा बालेको छु । र, म आफु पनि छाउपडीमा बसेको मान्छे हुँ । छाउपडी बस्दाको पिडा कति हुन्छ भन्ने कुरा जस्ले भोगेको छ उस्लाई मात्र थाहा हुन्छ । अहिले तिन तहको सरकार भइसके पछि केहि स्थानिय तहमा छाउ गोठ भत्काउने काम पनि भयो । तर, मलाइ लाग्दैन कि गोठ भत्काउँदैमा छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन्छ । जब सम्म छाउछुतको विषयलाई मनबाटै हटाइदैन तब सम्म त्यसको अन्त्य हुदैन । गोठ भत्काएर समाधान त भएन । गोठ भत्काइसकेपछि झन कोहि ओडारमा बसे । कोहि पालमा बसे । अन्त्य त भएन । त्यसैले दिगो समाधानको लागि शिक्षा, चेतना बढाउनुपर्छ । म यस मिडियाबाट पनि जानकारी गर्छु अबको स्कुले शिक्षा पनि त्यस किसिमको हुनुपर्छ । मैले आफैले संसदमा बोलेको याद छ । सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड फ्रि वितरण हुनुपर्छ भनेको थिए जुन अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि आयो । यो सरकारका निती पनि हो । र, सबै स्थानिय तहले यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।
६) अझै पनि बझाङ्गमा महिलाहरु अधिकारबाट वञ्चित छन् । महिला हिंसा, विभेद र पराधिनताले जरो गाडेको छ । कारणहरु केके जस्तो लाग्छ ?
कारणहरु धेरै छन । तर मुल जरो भनेको अशिक्षा र बालविवाह हो । बाल विवाहको अन्त्य हुन जरुरीछ । छाउपडी प्रथाको कारणले पनि शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित छन । अर्काे कुरा भनेको महिलो “नोथिङ्ग” भन्ने सामाजिक मानसिकता पनि छ । म आफै पनि बझाङ्गबाट संघिय सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्छ । र, पनि एउटा राजनिति बुझेको राजनिति गर्ने नेता आशा भनेको “नोथिङ्ग” भनेर बुज्छ भने दुरदराजमा डोको बोक्ने, घण्टौँसम्म एक काँधमा पानी बोक्ने र अर्काे काधमा बच्चा बोक्ने महिलालाई हेर्ने नजर के हुन्छ सोझै आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि आत्मनिर्भरता तिर जोड्न पर्याे । आयआर्जन बढाउन पर्याे ।
७) बझाङ्गमा महिलाहरु नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका कुराहरु पनि सुनिन्छन् । यसमा यथार्थ र कारण केहो ?
अस्ति मात्रै बझाङ्गबाट मलाई एकजना बहिनिको फोन आयो । माइति घर तलकोट भएको उहाँ सुवेडाको स्थानिय हुनुहुँदो रहेछ र नागरिकता नपाएर साह्रै दुख पाउनु भएको रहेछ । उहाँको श्रीमान दश वर्षदेखि बेपत्ता भएका रहेछन । ससुराको पनि मृत्यु भएको रहेछ । तर, उहाँको अहिले सम्म नागरिकता नबनेको रहेछ । उहाँले नागरिकता बनाउनका लागि बारम्बार सिडियो कार्यालय धाउँदा पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै फर्काइएको रहेछ । बझाङ्गमा विदेशबाट आएको कोहि पनि छैन । उहाँ बझाङ्गको छोरी हो बुहारी हो । यस्ता सामान्य कुरामा अल्झाइनु हुदैन । अर्को समस्या भनेको बालविवाहको कारणले हुने बहुविवाह पनि हो । सानै उमेरमा विहे हुन्छ कालान्तरमा जेठि मन पर्दैन र उसलाई नागरिकता दिए अर्काे विवाह पनि गर्न पाइदैन भनेर पनि नागरिकताबाट महिलालाई वञ्चित गरिएकोछ ।
८) अहिले तिन तहको सरकार छ । वडादेखि संघसम्म जनप्रतिनिधिहरुछन् । एकपटक भोट दिएर जिताईसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुसँग आफ्ना समस्या सुनाउन पनि पाइदैन । नेताहरुले फोन पनि उठाउँदैन्न भन्ने जनताको गुनासो छ नि?
मैले सार्वजनिक मिडिया मार्फत नै आफ्नो सम्र्पक नम्बर छोड्ने गरेकोछु । मलाई लकडाउनको बेला भारतबाट बाह्रबजे राती पनि भिडियो कल आए । त्यो बेला पनि जनताको पिर मर्का बुझेर भिडियो कल उठाएकोछु । संसदमै भएको बेला पनि मलाई कसैले पनि फोग गरेभने पनि अनिवार्य रुपमा कल ब्याक गरेकोछु । म्यासेज आएको हरेछ भनेपनि रिप्लाई गर्ने गरेकोछु । जात, धर्म, पार्टी केहि नभनेर सबैलाई समान तरिकाले हेर्ने गरेकोछु ।